I-yellow eye agate - amaqhubu ama-Agate - ISilica yakheka emadwaleni wedwala - Ividiyo
Thenga okwemvelo kwamehlo iso agate esitolo sethu
Ama-agate wamehlo aphuzi atholakala emaqhugwaneni agate, akhiwa nge-silica eyakhiwe emithanjeni yamatshe. Lezi zingqimba zakhiwa kusuka kumagesi abhajwe ngaphakathi kwensimbi eyenziwe ngentaba-mlilo eyenziwe ngokwakhiwa. Amakhethini agcwala uketshezi olunobisi lwe-silica oluvela ezintweni ezibonakalayo zentaba-mlilo, izingqimba zifakwa odongeni lwethambeka lisebenza kancane kancane liye ngaphakathi. Isendlalelo sokuqala esifakwe ezindongeni ze-cavity yaziwa kakhulu ngokuthi ungqimba lwe-priming. Ukwehluka kubalingisi besixazululo noma ezimeni zokubekwa kungadala ukuguquguquka okuhambisanayo kuzendlalelo ezilandelanayo. Lokhu kuhluka kuzendlalelo kuholela kumabhendi e-chalcedony, evame ukuhlangana ngezendlalelo ze-quartz crystalline quartz ezakha i-agate banded. Ama-agate angenalutho angakha futhi ngenxa yokufakwa kwe-silica egcwele uketshezi engangeni ngokujulile ngokwanele ukugcwalisa i-cavity ngokuphelele. I-Agate izokwakha amakristalu ngaphakathi komgodi oncishisiwe, i-apex yekristalu ngalinye lingakhomba enkabeni ye-patity. Amehlo we-Agate akhombisa ukumaka okukodwa okugxilile noma ngaphezulu okubizwa ngokuthi amehlo. Itshe elingajwayelekile.
I-Agate ingenye yezinto esetshenziswa kakhulu kwezobuciko bokubumba ngamatshe aqine, futhi isitholakele ezingosini ezithile zasendulo, okubonisa ukusetshenziswa kwayo kabanzi emhlabeni wasendulo; ngokwesibonelo, ukuvuselelwa kabusha kwezinto zakudala endaweni kaKnutossos eCrete kubonisa indima yayo kusiko le-Bronze Age Minoan.
I-Yellow eye agate nencazelo
I-agate yeso ophuzi ikhuthaza ukuqina kwangaphakathi, ukuzola, nokuvuthwa. Izici zayo ezifudumele nezivikelayo zikhuthaza ukuphepha nokuzethemba. Kuyikristalu enhle ukuyisebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa. I-Agate futhi isiza omama abasha ukugwema amablue ezingane kwesinye isikhathi abathola ngemuva kokubeletha, futhi ijeli le-Agate eligqokwa phakathi kwamabele likhuthaza ukukhulelwa.